Buy Sony Touch Screen i5 3rd Laptop. hdd 750GB in ရန်ကုန် (350,000 Ks) on ipivi
Sony Touch Screen i5 3rd Laptop. hdd 750GB
နာမည်ကြီး Sony တဲ့ကွ .. TOUCH SCREEN ကြီးနဲ့ Core i5 3rd gen ကိုမှ Nvidia 2GB နဲ့ Hdd 750GB ပါတယ်
#TOUCH SCREEN #TOUCH SCREEN ကြီးနဲ့နော်
#ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ပါးပါးလှလှ အသန့် Sony i5 Laptop
#အပွန်းစင်းကင်းတယ် 99%new နော် အရမ်းသန့်
#Core i5 3rd gen ကိုမှ Nvidia 2GB. Hdd 750GB နဲ့
#AutoCad. Game. Design ဆွဲ ဘက်စုံရပါတယ်
#ဈေးနူန်း (350,000 ks)
#CPU 👉 Core i5 3rd generation
#Hard disk 👉 750GB ပါတယ် 1TB နီးပါးနော်
#Graphic 👉 Nvidia 720M 2GB + Intel HD 2GB နဲ့ပါ Total graphic . 4GB ထက်ပါတယ်
အမည်:Sony Touch Screen i5 3rd Laptop. hdd 750GB